लामखुट्टेको टोकाईबाट कोरोना सर्ने सम्भावना कति ?
मुख्य पृष्ठखानपान स्वास्थ्य जीवनशैलीलामखुट्टेको टोकाईबाट कोरोना सर्ने सम्भावना कति ?
मौसम परिवर्तन भइरहेको बेलामा अहिले धेरै लामखुट्टेहरू आउन थालेका छन् । यस्तो अवस्थामा धेरैलाई लामखुट्टेबाट पनि कोरोना भाइरस सर्न सक्छ भन्ने चिन्ताले सताएको छ ।
तर न्यू साउथ वेल्स (एनएसडब्ल्यू) स्वास्थ्य रोग विज्ञानको एक रिपोर्टका अनुसार विश्वभरि लामखुट्टेले फैलाउने संक्रमणका कारण प्रत्येक वर्ष करिब ६ लाख मानिसहरू मर्छन् । करोडौं मानिसहरूमा गम्भीर खालका रोगहरू निम्त्याउन सक्छन् । यद्यपि कोरोना भाइरस लामखुट्टेको टोकाईबाट फैलिन सक्छ भन्ने कुनै पनि प्रमाण भेटिएको छैन ।
डाक्टर क्यामरन वेबले आफ्नो रिपोर्टमा कोरोना भाइरस लामखुट्टेले फैलिएको छैन भनेर दाबि गरेका छन् ।
उनले भनेका छन ‘ कोरोना श्वासप्रश्वासको विषाणु हो जुन एकबाट अर्कोमा हाच्छिउ वा खोकीका कारणले मात्र सर्छ । लामखुट्टेले डेगुं, पहेलो ज्वरो, चिकनगुनिया, रोज रिभर भाइरस र जीका भाइरस सार्न सक्छ । तर, केहि भाइरस तिनीहरूको पकडबाट बाहिर हुन्छन् ।’
एचआईभी र इबोला पनि भाइरस पनि लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्दैनन ।